Burma’s Obama? Not Quite.
မနေ့က စစ်အစိုးရ သတင်းစာတွေ ထဲမှာ “မေတ္တာကို မေတ္တာနှင့်သာ” ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးတပုဒ် ပါလာတာ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စီရင်ချက်ချတဲ့ကိစ္စနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးက သက်ညှာခွင့်ပေးတာကို ပြည်သူတွေက ကြိုဆိုကြပါတယ်တဲ့။
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်အတွင်းသို့ ယခုနှစ် မေလဆန်းတွင် တိတ်တဆိတ် ဝင်ရောက်ခဲ့သဖြင့် ပြီးခဲ့သည့် အင်္ဂါနေ့က ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ် ချမှတ်ခံခဲ့ရသူ...
အာဆီယံအသင်းဝင် နိုင်ငံ ၅ နိုင်ငံ ခရီးစဉ်၏ အစိတ်အပိုင်းတခုအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ အလည်အပတ် ရောက်ရှိနေသည့် အမေရိကန်နိုင်ငံ အထက်လွှတ်တော်အမတ် မစ္စတာ ဂျင်မ်ဝက်ဘ်သည် ပြီးခဲ့သည့် အပတ်...
အမေရိကန် ဆီးနိတ်အမတ် သက်ညှာခွင့်လွှတ်ရေး ခရီးစဉ်အဖြစ် မြန်မာပြည် လာသလော
ထင်ရှားသော အမေရိကန် နိုင်ငံရေးသမားတဦးဖြစ်သူ အထက် လွှတ်တော်အမတ် ဂျင်မ်ဝက်ဘ် (Jim Webb) သည် မြန်မာနိုင်ငံမြို့တော်သစ် နေပြည်တော်သို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး၊ ...
ပဲခူးတိုင်းအတွင်း တည်ရှိသည့် ရွှေကျင်မြစ်ရေ လျှံတက်သဖြင့် ရွှေကျင်မြို့နယ်ရှိ ဒေသခံများ နေထိုင်ရပ်တည်ရေး အခက်တွေ့နေရသည်။ ယခုလ ၁၀ ရက်နေ့မှ စတင်၍ စိုးရိမ်ရေအမှတ်အထက် ၂ ပေခန့်...
ထင်ရှားသော အမေရိကန် နိုင်ငံရေးသမားတဦးဖြစ်သူ အထက် လွှတ်တော်အမတ် ဂျင်မ်ဝက်ဘ် (Jim Webb) သည် မြန်မာနိုင်ငံမြို့တော်သစ် နေပြည်တော်သို့...
“လောက်ကိုင်မြို့မှာက နအဖစစ်သားတွေလည်း ရှိတယ်၊ ကိုးကန့်စစ်သားတွေလည်း ရှိနေတယ်။ ဆိုတော့ နှစ်ဖက် ပြန်တိုက်ကြပြီဆိုရင် ဒီမြို့ထဲမှာကို တိုက်ပွဲဖြစ်နိုင်တယ်။ တရုတ်ဘက်က အလုပ်လာလုပ်တဲ့သူတွေ အချို့ပြန်နေကြပြီ။ ဟိုတနေ့ ပစ်မယ်၊ ခတ်မယ် ဖြစ်တဲ့နေ့ကတည်းက ......”အပြည့်အစုံသို့
အမေရိကန် အမတ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တွေ့၊ ယက်တော ပြန်လွတ်ဖွယ်ရှိ
သြဂုတ် ၁၅၊ ၂၀၀၉
မြန်မာ့အရေး လုံခြုံရေးကောင်စီ တညီတညွတ်တည်း ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်
မစ္စတာဘန်ကီမွန်း စကားအသုံးအနှုန်းများ GJC အဖွဲ့ ရှုတ်ချ
စစ်အစိုးရအပေၞ ပိတ်ဆိုႛမှု အီးယူတိုးမြၟင့်
NLD ရပ်တည်ချက်ကို အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ်အား ရှင်းပြမည်